Annaga nagu saabsan - naadiga Muslimka
Blog-gani wuxuu sharxayaa aasaaska Islaamka, wuxuu sharxayaa nuxurka diinta, wuxuuna ku siinayaa aqoon kaa caawinaysa inaad ku dhegganaato Xaqa.
Annaga waxaad had iyo jeer ka heli doontaa macluumaadka ugu habboon mowduuca. Si booqdayaashayadu ay si sahal ah u helaan macluumaadka saxda ah, waxaan soo saarnay hagitaan u gaar ah gudaha maqaallada waxaanan u abuurnay qoraal gaar ah si aan u helno agabka ugu habboon ee adeegsadaha.
Haddii aad rabto inaad hesho warbixin kooban oo ku saabsan goobta, waxaad iska qori kartaa RSS feed ama warsidaha, kaasoo daabacaya agabkii ugu caansanaa ee bil gudaheed lagu daabaco boggan.
Sidan, waxaad had iyo jeer heli doontaa xogtii ugu dambaysay, ee ugu dambaysay.
Hawsha ugu weyn ee mashruuceena ayaa ah inay adiga, akhristayaasha, siiso macluumaad aad u ballaaran, la dalbaday intii suurtagal ah.
Boggayagu wuxuu diiradda saarayaa dadka caadiga ah ee raadinaya macluumaad ku saabsan mowduuca ay xiiseynayaan.
Waxaan isku dayeynaa inaan si fiican u bixinno maaddooyinka si aadan u jeclayn inaad faahfaahin ka raadsato meel kale.
Waxaan si joogto ah u koreynaa oo horumarineynaa.
Khayraadka waxaa ka buuxa maqaallo iyo tafatirro cusub maalin kasta, sidoo kale waad ka qayb qaadan kartaa.
Waxaad noogu soo diri kartaa talooyinkaaga, fikradahaaga iyo waxyaabo kaloo badan foomka jawaab -celinta.
Si xushmad leh, maamulka mashruuca.
Su'aal soo noqnoqota: Maxaa ka dhexeeya Islaamka iyo ganacsiga Bariga iyo Galbeedka Afrika?
Islaamku wuxuu markii ugu horreysay ku yimid Galbeedka Afrika si tartiib tartiib ah oo nabdoon, oo uu ku faafay
Camalka xun ma la badiyaa Ramadaanka?
Bisha Ramadaan, Allaah wuxuu ku labanlaabiyaa camalka wanaagsan 70. Laakiin kuwa
Ilaa intee ayay tahay maalinta xukunka Islaamku?
Muxuu Allaah samayn doonaa maalinta qiyaame? Yawm ad-Din waa maalinta qiyaame.
Waxaad weydiisay: Ma xaaraan baa in magac dhexe la yeesho?
HAA, wuxuu noqon karaa magac dhexe laakiin waa inaadan bedelin magacaaga dhexe
Sideed u cuni wayday Ramadaanta?
Inta lagu jiro Ramadaanka, Muslimiintu way ka fogaadaan inay cunaan wax cunto ah, cabbitaan wax dareere ah, cabbidda sigaarka, iyo
Maxay Islaamku ka qabtaa guurka labaad?
Sida shareecada qabta, ninka muslimka ah waxaa laga yaabaa inuu guursado ilaa afar dumar ah, taasoo ka dhigaysa
In la is qurux badan yahay ma Xaaraam baa?
Dhammaan shaaha ma xalaal baa?
Su'aashaada: Canshuur bixintu ma xaaraan ayey ka tahay Islaamka?
Waa maxay 2da qaybood ee ugu waaweyn Islaamka *?
Xeebta Corniche ma furantahay Ramadaanka?
Xagee suufiyadu ku faafiyeen Islaamka?
Su'aal: Maxay dammaanad-qaadku uga xaaraan yihiin Islaamka?